मानिसको आ-आफ्नै आनीबानी बारे कुरा गर्ने हो भने सबै मानिसको कुन व्यवहार स्विकार्य र कुन कुरा अस्विकार्य भन्ने आ–आफ्नै धारणा हुन्छ तर एक अज्ञात व्यक्तिले बाथरुममा गरेकाे बानी बारे एउटा सामान्य प्रश्न मात्र उठाइदिँदा पनि ठूलो चर्चको बिषय बनेको छ । एकजना सहभागीले केहि समय अघि आफ्ना साथीहरुका घरमा बस्नेबेला.....
तपाईंलाई अचम्मका लाग्ला कि एउटा जनजाती यस्तो पनि छ जहाँका ६–७ बर्ष उमेरका बालबच्चाले स म्भो ग ग’र्न थाल्छन् । पपुआ न्यू गिनीमा बस्ने ट्रोबियान्ड जनजातीको समूदायमा यस्तो प्रचलन छ । यतिमात्र होइन, ११–१२ वर्ष भएपछि यहाँका बच्चाहरुको विवाह पनि भइसक्छ । अझ अचम्मको कुरा के छ भने यहाँका बच्चाहरुलाई शा’ रि ’रि’क.....
दुई पटक ब ला त्कृ त भएकी एक युवतीले महिलाहरूलाई आफ्नो सुरक्षाको लागि हति यार बोक्न आग्रह गरेकी छिन् । ‘बन्दुककी रानी’ भनेर चिनिने २६ वर्षीया ओरिन जुलीले इजरायलमा चेतना जगाउन आफ्ना दुःखदायी अनुभवहरू खुलाएकी छिन् । उनी अनलाइन बन्दुक र यससम्बन्धी सामान बिक्री गर्ने पसल चलाउँछिन् । सरकारले नियमहरू खुकुलो.....
एजेन्सी- अहिले एक भिडियो निकै नै भाइरल भइरहेको छ । भिडियोमा भारतको सत्तारुढ दलका नेतालाई देख्न सकिन्छ । भारतका एक नेताको बिवादस्पद भिडियो निकै नै भाइरल बनिरहेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यम आजतकका अनुसार भाइरल भइरहेको भिडियोमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेतालाई देख्न सकिन्छ । यो भिडियो राजस्थानका एक भाजपा.....
भारतको गुजरातमा रहेको गान्धीनगरमा २६ वर्षीया शिक्षिका आठ कक्षामा पढ्ने १४ वर्षीय विद्यार्थीका साथ भागेकी छन् । विद्यार्थीका पिता सरकारी कर्मचारी हुन् र उनले प्रहरीसमक्ष शिक्षिकाका विरुद्ध उजुरी दर्ता गरेका छन् । शिक्षिकाले छोरालाई फकाएर आफूसँग लगेको उनको आरोप छ । एक प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार, शिक्षिका.....
अहिले अमेरिका र नेपालको भिन्नताबारे सामाजिक सञ्जालमा केही टुक्काहरू भाइरल हुने क्रममा छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले अमेरिका र नेपालका २५ फरक भिन्नताहरू सङ्कलन गरेर राखेका छौँ । १. अमेरिकनहरू भोलि भोकै हुन किन नपरोस् आज टन्न खान्छन् । हामी नेपालीको संस्कार भोलि भोकै हुनुपर्ला भन्ने चिन्ताले आज भोकै बस्छौ.....
एजेन्सी- सुपरमार्केटमा सामान किन्न गएकी एक महिलालाई बिना मास्क प्रवेश गर्न नदिइएपछि उनले आफ्नो भित्रै व-स्त्र फु’का-लेर मास्कको रुपमा लगाएकी छिन् । ती महिलाले भित्रै व-स्त्र खो-लेर त्यसलाई मास्कको रुपमा लगाएको भिडियो भाइरल भएको छ । द सनको रिपोर्टअनुसार यो अनौठो घ-टना दक्षिण अफ्रिकाको पिक एन पे सुपरमार्केटको.....
सडक दु’र्घटनामा मृ-त्यु भएका एक व्यक्तिको श’व अस्पतालमा थियो । श’वको पो-स्ट-मा’र्टम गर्ने तयारी भइरहेको थियो । त्यही बेला पोस्ट-मा’र्टम गर्न लागिएका मृ’तक सडकको चौ’राहामा चिया पि’उँदै ब’सेको खबर आएपछि एकाएक ह’ल्लाखल्ला भयो । भारतको उत्तर प्रदेशको देवरियामा यो विचित्र घ’टना भएको हो । खासमा त्यहाँ सडक.....
सुहागरातमा बेहुलीको बेवास्ता गर्दै बेहुलाः तस्विर भाइरल, खास कारण थाहा पाउदा चकित
एजेन्सी- बिहेपछिको पहिलो रात सबैका लागि विशेष हुन्छ । तर सोही रात कोही मान्छे आफ्नो नियमित काम छोड्न मान्दैन् । सुन्दा अच्चम लाग्ने यस्तै देखाउने तस्बिर केहि समयदेखि भाइरल बनिरहेको छ । तस्विरमा विवाहको पोशाक लगाएको दुलाह उसको कम्प्युटर स्क्रिनमा व्यस्त देखिएका छन् । अर्कोतिर दुलही ओछ्यानमा बसेको विहेको.....
बच्चा नहुने महिलालाई ‘बच्चा’ हुने बनाइदिने भन्दै बाबा आफैं जुटेपछि…. (भिडियोसहित)
बिज्ञानमा भरोसा नरहेपछि मानिस आध्यात्मको सहारा लिने गर्दछ । बिवाहित जोडिको बच्चाहुनु एक जैविक प्रकृया हो । यो प्रकृया असन्तुलित भए बच्चा नहुनसक्छ । बच्चा हुने बनाइदिने भन्दै बाबा आफैं जुटेको पाइएको छ ।घटना उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनऊको हो । त्यहाँ काले बाबा नाम गरेको एक मानिस यसका लागि चिकित्सा विज्ञानले.....